पिडित श्रीमतीको बयान : मलाई मेरा श्रीमानले आफ्नै साथी ल्याएर…. – List Khabar
Home / समाचार / पिडित श्रीमतीको बयान : मलाई मेरा श्रीमानले आफ्नै साथी ल्याएर….
admin January 29, 2022 समाचार Leaveacomment 50 Views
एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीलाई कर णी गरेको घटना बाहिर आएको छ । पक्राउ परेका ति ब्याक्तिले आफ्नी श्रीमतीसँग स’म्बन्ध राखेकी जसले गर्दा घटना भाइरल हुदै गयो। यसका लागि पुरुषले आफ्नो एक सहकर्मीलाई आफ्नी श्रीमतीसँग यौ ‘नस’म्प’र्क ग’र्न घर ल्याए । श्रीमानले आफुलाई साथि सहित कर णी ग’र्न खो’जेको श्रीमतीलाई पत्तै भएन ।
यस जोडीको विवाह २३ वर्ष भइसकेको छ र उनका तीन सन्तान छन् । तर श्रीमानले एकै रातमा आफ्नो लामो स’म्ब’न्धलाई बिस्राम दिन पुगे। उनले साथीसँग मिलेर श्रीमतीलाई कर णी ग’र्ने योजना बनाए । त्यो दिन ४८ वर्षीय श्रीमानले आफ्नो ४५ वर्षीय पार्टनरलाई आफ्नो बेडरूममा बोलाए ।
ती व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको र’क्सी’मा बे’हो’शको औ’ष’धी मि’सा’इदि’एका थिए। दुईजना सुत्ने कोठामा प्रवेश गर्दा ती व्यक्तिकी ४४ वर्षीया श्रीमती आँखामा प’ट्टी बाँ’धे’र अ’चे’त अवस्थामा पसेकी थिइन् । अपरिचित व्यक्तिले युवतीलाई कर ‘णी ग’र्न खो’ज्नेबि’त्ति’कै उनलाई हो’श आ’यो र पुरुष भा’गे । यो घटना सिंगापुरको हो।
यस घटनामा, सिंगापुरको उच्च अदालतले बिहीबार सहकर्मी, हाल ४७ वर्षीयालाई ष’ड्यन्त्र र महिलाका श्रीमानलाई कर णी प्रयास गरेकोमा दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सन् २०१५ मा दुवै जना सहकर्मी भएको बताएको थियो । ती पुरुषले आफ्नो से’ ‘क्स ला’इफसँग सम्बन्धित सबै कुरा सहकर्मीसँग सेयर गर्थे । उनले आफ्नी श्रीमतीसँग अर्को पुरुषसँग यौ’नस’म्प’र्क ग’रे’को हेर्ने इच्छा रहेको बताए ।
श्रीमानले आफ्नी सहकर्मीलाई आफ्नी श्री’मतीसँग यौ’न’स’म्पर्क ग’र्न उनलाई घरमा बोलाए । त्यसपछि श्रीमानले उनलाई श्रीमतीकहाँ जान संकेत गरे । यस क्रममा महिलाका छोराछोरी र कामदार घरको अर्को भागमा सुतेका थिए ।
पुरुषले महिलासँग स’म्बन्ध राख्न खोजे तर असफल भए । अज्ञात व्यक्तिले उनीसँग यौ’न’स’म्प’र्क गर्न खोजेको थाहा पाएपछि ती महिलाले हो’शमा फर्किइन् र आँ’खाको प’ट्टी ह’टा’उने प्रयास गरिन् । यो देखेर मानिस भा’गे । पछि थाहा भयो कि व्यक्तिलाई इ’रे’क्टा’इ’ल डि’सफं’क्शन’ थियो। कुनै न कुनै तरिकाले ती महिलाले ती व्यक्तिलाई भेट्टाइन् र आफ्नो पति र साथीलाई क’न्फे’श’न लेटर लेख्न लगाइन् ।
अर्की एक महिलाले श्रीमान्को फोनमा आफू र अरू केहीले यौ’न दु’रा’चा’र ग’रेको आ’शंकामा आफ्ना श्रीमान्को फोनमा आफ्ना अ’न्तरं’ग फोटोहरू पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । ती महिलाका श्रीमान पक्राउ परेका छन् । यसै क्रममा हालको मुद्दाका आरोपी श्रीमान पनि शं’काको घेरामा परेका छन् ।
अभियुक्तहरू लाइ सरकारी वकिल चि ई लिङले श्रीमतीलाई कर णी गरेको घटनामा दोषी ठहर गर्दै साढे दुई वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेका छन् ।
Previous ओ-मिक्रोनपछि फेरि देखियाे अर्काे ख`तरनाक भेरिएन्ट, हरेक ३ संक्रमितमध्ये एक जनाको मृ-त्यु हुने !
Next यी ५ राशि हुनेहरुलाई मानिसलाई आँखा चिम्लिएर गर्दा हुन्छ विश्वास !